CAR T (Cunugga Qaboobaha Antigen-T)
Barnaamijyada daawaynta gacanta ee Sorrento waxay diiradda saaraan Chimeric Antigen Receptor-T Cell (CAR T) ee korsashada difaaca jirka si loo daaweeyo burooyinka adag iyo kuwa dareeraha ah labadaba.
Barnaamijka CAR T waxaa ku jira CD38, CEA iyo CD123.
Sorrento's CD38 CAR T wuxuu bartilmaameedsadaa unugyada wanaagsan ee CD38 ee muujin kara, kuwaas oo xaddidi kara sunta bartilmaameedka/off-ka-baxsan ee burada.
Musharaxa shirkadda CD38 CAR T ayaa hadda lagu qiimeeyaa dhowr myeloma (MM). Barnaamijku wuxuu si guul leh u soo bandhigay firfircoonida ka hortagga burada ee hore ee moodooyinka xayawaanka wuxuuna hadda ku jiraa tijaabada wajiga 1 ee RRMM. Intaa waxaa dheer, Sorrento wuxuu ka warbixiyay xogta Wajiga I ee tijaabooyinka cudurka kansarka ee antigen (CEA) ee hagaya barnaamijka CAR T.
Shirkaddu waxay ku qiimaynaysaa CD123 CAR T ee cudurka leukemia-ga myeloid ba'an (AML).
DAR T ( Unug-qaade Dimeric Antigen-T)
Sorrento waxay isticmaashaa tignoolajiyada garaaca garaaca ee gaarka ah (KOKI) si ay wax uga beddesho deeq bixiyayaasha caafimaadka qaba ee caadiga ah ee unugyada T si ay u farsameeyaan iyaga si ay u muujiyaan daaweeyaha dimeric antigen receptor T-cell reseptor (TCR) Alfa silsilad joogto ah gobolka (TRAC). Sidan, TRAC waa la garaacay oo antigen waxaa lagu garaacay goobteeda.
Dimeric Antigen Reseptor (DAR) wuxuu isticmaalaa Fab halkii uu ka isticmaali lahaa scFv ee ay isticmaalaan unugyada T-da ee Chimeric Antigen Receptor (CAR). Waxaan aaminsanahay in DAR-da lagu soo bandhigay daraasado hore oo khaas ah, xasillooni iyo awood.
Qaboojiyaha Antigen-ka ee Chimeric (CARs)
Tignoolajiyada unugyada CAR T ee hadda
Xiga-Gen Dimeric Antigen Reptor (DAR) Farsamada